SUPERBAHİS RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK - SÜPERBAHİS709.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK
November 28, 2020 SÜPERBAHİS KAYIT SÜPERBAHİS GİRİŞ 4
Na Sivasspor, onye meriri onye nnọchi anya Azerbaijani Karabakh 2-0 na UEFA Europa Njikọ, Onye nkuzi Rıza Çalımbay kwuru nkwupụta na ogbako ogbako emere mgbe egwuregwu ahụ gasịrị.
Çalımbay kwuru na ha nwere ikike karịa na egwuregwu ahụ wee sị, Anyị ga emerịrị egwuregwu a. Maka na ọ bụrụ na anyị merie, ọdịmma anyị ga-aga n’ihu. Ọ bụ ya mere anyị ji eji ihe niile egwuri egwu na egwuregwu a. Anyị echeghị banyere ntụgharị.
egwuregwu Galatasaray adịghị n’anya anyị. Ọ bụ egwuregwu a dị anyị mkpa. Akụkụ ụfọdụ nwere ike iche echiche otu a. Ọtụtụ ndị enyi anyị anaghị egwu egwu merụrụ ahụ. Ugbo na egwuregwu kacha elu bụ nke anyị site na mmalite ruo na njedebe nke egwuregwu ahụ. Na njedebe nkera nke abụọ, ha mere ọtụtụ ngafe, mana anyị mere ya n’uche ” kwuru.
“M na-ekele ndị otu m”
Onye nchịkwa nwere ahụmahụ kelere ndị egwuregwu na mmeri ahụ, Nke mbụ, kelee ndị otu m. Anyị nwetara ezigbo mmeri. Nke abụọ, anyị gbara egwuregwu abụọ n’ime ụbọchị ise.
Twobọchị abụọ mgbe e mesịrị, anyị ga-egwu megide Galatasaray. N’ụzọ dị otú a, ọ bụ ihe dị mma inwe mmerụ ahụ na otu. E nweghị ndị ọzọ na-egwu egwuregwu dị ka anyị na-eme ugbu a. Nke a nwere ike ịkpata nsogbu site n’oge ruo n’oge.
Anyi na enwekwa nsogbu ndia ugbua. Nanị ihe anyị na-atụ anya ya bụ nkwụsịtụ mgbe egwuregwu Galatasaray gasịrị. Anyị kwesịrị iji oge ezumike ahụ mee ihe nke ọma.
Site na mgbakwunye nke ndị enyi anyị merụrụ ahụ n’otu, anyị ga-adị njikere maka asọmpi egwuregwu abụọ na nke European. M tụkwasịrị ndị otu m na ndị egwuregwu anyị obi.
Enwere m olile anya na anyị ga-abụ otu dị iche iche mgbe ndị enyi anyị nwere nkwarụ gbakere ma sonyere otu “.
SUPERBAHİS983 VİNCENT ABOUBAKAR SADECE 1 GOL ATABİLDİ SUPERBAHİS983 RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK SUPERBAHİS983 RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK SUPERBAHİS983 RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK SUPERBAHİS983 RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK SUPERBAHİS983 NAZIM SANGARE: GÖKHAN GÖNÜL’E FORMAYI BİR DAHA VERMEM SUPERBAHİS983 SALZBURG MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEYECEK SUPERBAHİS983 SOLSKJAER: BAŞAKŞEHİR ZOR BİR TAKIM SUPERBAHİS MAX KRUSE UNİON BERLİN’DE GÖNÜLLERİ FETHETTİ SUPERBAHİS RONALDO LAZİO’YU DA BOŞ GEÇMEDİ
4 Comments on SUPERBAHİS RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK
DİNÇ November 29, 2020 at 5:50 am
süperbahis canlı casino lisansı nedir bu sitenin sorgulatabiliyormuyuz?
DİDEM December 1, 2020 at 9:20 am
süperbahis canlı bahis ödemeleri sağlam mı bu sitenin arkadaşlar ilk kez üye olacağım?
EMİNE December 6, 2020 at 2:50 am
NURDAN December 12, 2020 at 10:00 am